फोहोर रगत सफा गर्न पिउनुस् यी ५ पेयपदार्थ access_timeकात्तिक ८, २०७७
एजेन्सी – रगतद्वारा हाम्रो शरीरको पूरै प्रणाली सञ्चालन हुन्छ । शुद्ध रगत नै हाम्रो जीवनको आधार हो । रगतले नै हाम्रो शरीरको हरेक अंगमा अक्सिजन र पोषक तत्त्व सञ्चार गर्ने काम गर्छ । शरीरमा हर्मोनहरु पनि रगतबाट नै उत्पादन हुने गर्छ । त्यसैले शरीरमा भएको रगतमा कुनै खरा...
स्वस्थ रहन मासुको सेवन यसरी गरौं access_timeकात्तिक ७, २०७७
चाडपर्वको बेलामा हरेकको भान्सामा विभिन्न परिकारका खानेकुरा पाक्छन् । अन्य पर्वमा भन्दा बडादसैँमा खानेकुराका परिकार मध्ये प्रमुख परिकारको रुपमा मासु लिइन्छ । पर्वको समयमा मासुको मात्रै धेरै परिकार बनाएर खाने गरिन्छ । चाडपर्वमा खानेकुरा मिलाएर खान नजान्दा चाडपर्व ल...
पेटमा हुने ग्यास र भारीपनको समस्याबाट छुटकारा पाउन के गर्ने ? access_timeकात्तिक ४, २०७७
एजेन्सी – धेरैजसो मानिसहरु पेटमा हुने ग्यास र भारीपनको समस्याबाट गुज्रिरहेका हुन्छन् । पेटमा ग्यास भरिएपछि भारीपन हुने समस्या हुन्छ । जसको कारण दैनिक जीवनयापनमा निकै कठिनाई हुन्छ । त्यसैले कहिले काँही जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्दा ग्यासको समस्या कम हुन्छ । खानामा...
कालो चियाबाट हुने लाभबारे यी कुरा जान्नुहोस् access_timeकात्तिक ३, २०७७
संसारभरी चियाको शौखिनहरुको कमी छैन । चियाका विभिन्न स्वाद र प्रकार आ–आफ्ना फाइदाका लागि परिचित छन् । तर के तपाईंलाई कालो चिया पनि फाइदाजनक हुन्छन् भन्ने बारे थाहा छ ? कालो चियाबाट हुने लाभबारे जान्न चाहनुहुन्छ भने यो पढ्नुहोस्ः १. हृदयका लागि फाइदाजनकः ...
आलस लगाएर यसरी छालालाई बनाउनुहोस् गोरो र चम्किलो access_timeकात्तिक २, २०७७
आलसको गुणः आलसमा एन्टीफंगल, एन्टीअक्सिडेन्ट, एन्टिडायबिटिक, एन्टिथ्रोम्बिक, एन्टिहाइपरटेन्सिव र एन्टिट्युमरजस्ता गुण हुन्छ । त्यसैले यसलाई आयुर्वेदमा उत्तम औषधी मानिन्छ । छालालाई क्षती हुनबाट जोगाउँछः घामका कारण छालामा हुने क्षती र सन ट्यानबाट आलसले सुरक्षा प्रदान ग...
सुक्निता बनिन् ‘बेष्ट फेसन डिजाइनर अफ द इयर’ access_timeकात्तिक २, २०७७
फेसन डिजाइनर सुक्निता चौलागाईंलाई ‘बेष्ट फेसन डिजाइनर अफ द इयर’ बाट सम्मान गरिएको छ । बिहिबार राजधानीमा सम्पन्न भएको ‘दोस्रो फेशन एण्ड मोडल अवार्ड’ कार्यक्रममा सुक्नितालालाई उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको हो । फेसन डिजाइनिङ...
कब्जियतबाट छुटकारा पाउनका लागि नुनपानी access_timeकात्तिक १, २०७७
एजेन्सी – कब्जियतका समस्या कुनै पनि उमेरका मानिसलाई हुनसक्छ । संसारभर करिब २० प्रतिशत मानिसहरु कब्जियतको समस्याबाट पीडित हुन्छन् । उपचारबाट कब्जियत निको गराउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले कब्जियतको समस्याबाट छुटकारा पाउनका लागि घरेलु उपचार पनि गर्न सकिन्छ । नु...
मेवाको फूलको पनि फाइदा नै फाइदा ! access_timeअसोज ३०, २०७७
एजेन्सी – प्रकृतिको उपहारको रुपमा पाइने विभिन्न फलफूलले मानव स्वास्थ्यमा निकै फाइदा पुर्याउने गर्छ । मानव शरीरलाई स्वस्थ्य र मजबुत बनाउन विभिन्न फलफूल नभई हुँदैन । त्यसैले हरेक दिन विभिन्न प्रकारका फलफूलको सेवन गर्ने गरिन्छ । यसमध्ये मेवा स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाज...
‘भिटामिन बी–१२’ को तौलसँग सम्बन्ध छ कि छैन ? access_timeअसोज ३०, २०७७
एजेन्सी – हाम्रो दैनिक जीवनयापनका क्रममा खाने खानाका कारण तौल बढ्ने गर्छ । त्यसैले स्वस्थ्य तौलका लागि खानामा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । तर, कहिले काँही स्वस्थ्य खाना खाँदा पनि तौल बढ्न सक्छ । यसका साथै, भिटामिन बी–१२ को कमीले पनि तौल बढ्न सक्छ । भिटा...
रेड एप्रोन : जहाँ पाइन्छ एउटै छानामुनि ६० किसिमका मासुजन्य उत्पादन access_timeअसोज २९, २०७७
काठमाडौँ । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–४ स्थित हर्षचोक र बालकोटमा चिटिक्क परेका दुईवटा मासु पसल छन् । नाम हो– ‘रेड एप्रोन ।’ बट्टाईदेखि कालिजसम्मका मासु एकै छानामुनि पाइने सो पसलको आफ्नै पौरखको कथा छ । रेड एप्रोन कोही करोडपति ब्यापारीको...
अनुहारको छाला र कपालको चमक बढाउन लौकाका जुस, अन्य ६ फाइदा access_timeअसोज २६, २०७७
एजेन्सी – धेरै जसो मानिसहरु लौकाको जुस पिउन मन पराउँदैनन् । तर, स्वस्थ्य रहनका लागि नमिठो खानेकुरा खान आवश्यक हुन्छ । यस्तै, लौकाको स्वाद पनि निकै नमिठो हुन्छ । तर लौकामा हुने विभिन्न पोषक तत्वले मानिसको कपाल, छाला लगायतका शरीरका विभिन्न अंगहरुलाई लाभ दिन्छ ।&...
चम्किलो छाला चाहनुहुन्छ ? विशेषज्ञले सुझाएका यी फलफूल सेवन गर्नुहोस् access_timeअसोज २६, २०७७
छाला रोग विशेषज्ञले चम्किलो छालाका लागि केही उत्कृष्ट फलफूलको सेवन गर्न सुझाउँछन् तर यस पछाडिको कारण के होला ? सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि फलफूल राम्रो औषधी हो । यदि तपाईंले स्वस्थ आहारविहार गर्नुहुन्नँ भने सौन्दर्य प्रशाधनका कुनै पनि उत्पादनले तपाईंको छालालाई चम्किलो...
प्याजको बोक्रामा लुकेको छ स्वास्थ्य र सौन्दर्यका यी पाँच राज access_timeअसोज २५, २०७७
थुप्रै अनुसन्धानले बताए अनुसार प्याजको बोक्रा एन्टिअक्सिडेन्ट, फाइबर, भिटामिन ए, सी, इ र मुटुलाई फाइदा पुर्याउने फ्लेभोनोइड्सले भरपुर हुन्छ । प्याजको बोक्राले रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्ने, मुटुलाई स्वस्थ राख्ने र रगतमा चिनिको स्तरलाई नियन्त्रणमा राख्ने काम गर्छ । भारतक...
भोक कम गर्नुका साथै तौल घटाउन पनि मद्दत गर्ने यी चार खाना access_timeअसोज २५, २०७७
बोसोलाई कम गर्ने र मांसपेशीलाई बढाउन मद्दत गर्ने कुनै विशेष खाना पाइँदैन । यसैकारण सबैले आफ्नो डाइट प्लानलाई समग्र रुपमा हेर्न आवश्यकता छ । यसैगरी खानाको मद्दतले शरीरको कुनै विशेष अंगबाट बोसो कम गर्ने सम्भावना पनि छैन । तर केही यस्ता खाद्य पदार्थ छन् जसले तपाईंलाई ला...
कपाल झर्न नरोकिए के खाने ? access_timeअसोज २४, २०७७
एजेन्सी – कपाल झर्दा जो कोहिलाई पनि चिन्ता लाग्न सक्छ । सुन्दरताका लागि स्वस्थ्य कपाल पनि कुन आवश्यक छ । यदि कपाल टुक्रिन वा झर्न थाल्यो भने स्वास्थ्य समस्या भएको हुनसक्छ । वास्तवमा स्वास्थ्य विशेषज्ञका अनुसार कपाल झर्ने समस्या खानेकुरा र जीवनशैलीसँग सम्बन्धित हुन्...
पेटमा भएको ‘स्ट्रेच माक्र्स’ हटाउन सरल विधि access_timeअसोज २४, २०७७
एजेन्सी – सामान्य वा शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माएका महिलाहरुको पेटमा ‘स्ट्रेच माक्र्स’ बस्छ । गर्भवती भएको अवस्थामा पेटको छाला तन्किएर बसेको धर्साका कारण धेरै महिलाहरुलाई पछि निकै समस्या पर्ने गर्छ । गर्भवती भएको १३ देखि २१ हप्तामा पेटमा यस्तो धर्...
कपडामा लिपिस्टिक लागेर हैरानी भयो ? अपनाउनुस् यस्ता टिप्स access_timeअसोज २२, २०७७
लिपिस्टिक महिलाहरुको मनपर्ने मेकअप प्रडक्ट हो । उनीहरुलाई लिपिस्टिक लगाउन खुबै मनलाग्छ । तर, ओठमा लिपिस्टिक जति राम्रो देखिन्छ, कपडामा लागे त्यति नै खराब हुन्छ । कतिपटक गल्तीवस पुरुषहरुको सर्टमा वा कपडामा पनि लिपिस्टिकको दाग बसिदिन्छ । मानिसहरुलाई लिपिस्टिकको दाग सहजै...
बिहान खाली पेटमा तामाको भाँडामा राखेको पानी पिउनुस्, मिल्नेछ यी रोगबाट छुटकारा access_timeअसोज २२, २०७७
एजेन्सी – भारत र नेपालमा तामाको भाँडाको निकै महत्त्व हुन्छ । तामाको भाँडालाई पूजा समेत गर्ने प्रचलन रहेको छ । भगवानको पूजाआजा गर्न होस् वा विवाह, व्रतबन्ध जस्ता पवित्र धार्मिक कार्यहरुमा प्रयोग गरिने तामाको भाँडामा राखिएको खानेकुराले शरीरलाई फाइदा समेत गर्छ ।&nb...
प्रेम सम्बन्ध कमजोर कति कमजोर बन्दैछ, यी संकेतबाट बुझ्नुस् access_timeअसोज २१, २०७७
कुनै पनि सम्बन्ध प्रेम र विश्वासमा टिक्छ । पति र पत्नीमा पनि यो लागू हुन्छन् । जब आपसी प्रेम, आफ्नोपन र सम्मान रहन्छ, तब दम्पत्तीको सम्बन्धमा चमक कायम रहिरहन्छ । सम्बन्धमा आएपछि जब दम्पत्तीले लामो समय बिताउँछन्, तब समस्याहरु पनि सुरु हुन्छन् । कुनै समय त पार्टनरका केही बान...
यौन सम्पर्कका बेला यी कुराले चिन्तित हुन्छन् पुरुष access_timeअसोज २०, २०७७
आम रुपमा यौन सम्बन्धलाई लिएर महिलाको मनमा डर र संशय रहेको हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । जस्तो, उनीहरु आफ्नो फिगर, लुक्स र व्यक्तित्वलाई लिएर धेरै सोच्छन् । पुरुषको मनमा अन्तरङ्ग सम्बन्धलाई लिएर खासै चिन्ता हुँदैन र उनीहरुको एउटै उद्देश्य आफ्नो महिला पार्टनरलाई सन्तुष्टि महसुस गराउन क...
ट्याटुको शौखिन हुनुहुन्छ ? सावधान ! access_timeअसोज २०, २०७७
यदि ट्याटु खोप्न सौखिन हुनुहुन्छ भने सावधान हुनुहोस् । यो शौखले तपाईंलाई मुटुसम्बन्धि खतरा बढाउन सक्छ । जर्नल अफ अप्लाइड फिजियोलोजीमा प्रकाशित अनुसन्धान अनुसार छालामा ट्याटु भएक कारण त्यसमा पसिना नियन्त्रण गर्ने क्षमता घट्ने गर्छ । जसका कारण शरीरको तापक्रम बढ्ने गर्छ । यसले...